- မိမိဘ၀အတွက် အမြဲတမ်း ငြိမ်းအေးသက်သာမှုကို ရရှိစေမယ့်နည်းလမ်းကို သံသယရှင်းစွာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိတော့ဘဲ ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အမိအရ ဆွဲယူဆုပ်ကိုင် အသုံးချလိုက်တဲ့ စိတ်အဆင့်။
အမေ့မေ့ အလျော့လျော့ ဖြစ်နေသောစိတ်
- သတိစိတ် မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- သိချင်လို့မေးတာ။ မသိလို့မေးတာ။ မိမိသိချင်တဲ့အဖြေကို တိတိကျကျ၊ မရမချင်းမေးတာ။ မိမိလုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရမလဲ? ဒီအဖြေကို သိမှဖြစ်မှာမို့လို့ သိအောင်မေးတာ။ သိချင်နေတာကို မိမိကိုယ်တိုင် တကယ် သိရှိ နားလည်သဘောပေါက်မှ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ သိကြည့်လို့ရမှာဆိုတော့ သိအောင်မေးတာ။ (မမြင်ရတဲ့ စိတ်သဘောတွေကို တကယ်မသိဘဲနဲ့ ရမ်းသန်းပြီး ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ ဆိုတဲ့ အဖြေမျိုးက မသေချာနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ သိကြည့်ဖို့ ခက်နေတတ်တဲ့ စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့သဘောကို မိမိကိုယ်တိုင် တကယ်သိမှ၊ တကယ် နားလည်သဘောပေါက်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ မေးရမယ်၊ မသိမချင်း မေးရမယ်။)
- မိမိသိချင်နေတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ အလောတကြီး အမြန်ဆုံး သိချင်နေတဲ့စိတ်။
- မိုက်မဲနေသူရဲ့ မိုက်မဲမှု အတိုင်းအတာကို ခန့်မှန်းတွက်ဆလို့မရအောင် ဆိုးရွားနေတဲ့ စိတ်အခြေအနေ။
- မလိမ်မိုး မလိမ်မ္မာနဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံ နုနယ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့ ဂရုမစိုက်သလို၊ စိုက်သလို ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- ဒေါသထွက်နေခြင်း၊ စိတ်ဆိုးနေခြင်းကို ဖော်ပြတဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်။
- ရှေ့ကစကားကို ပြောလိုက်တုန်းက စိတ်ကတစ်မျိုး။ နောက်တစ်ခါ ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာ စိတ်က နောက်တစ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ ရှေ့နောက် မညီမညွတ်ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
စိတ်ကိုခြယ်လှယ်တဲ့ စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့ သဘောကို သိကြည့်ခြင်း